एमाले प्रदेश अधिवेशनको मिति सर्‍याे, अब कहिलेलाई तोकियो मिति ? - Sampurnab Khabar
एमाले प्रदेश अधिवेशनको मिति सर्‍याे, अब कहिलेलाई तोकियो मिति ?
काठमाडौं, २७ पुस ।एमालेको प्रदेश अधिवेशनको मिति सरेको छ । एमालेले आगामी ८ माघमा तीन सय ३० प्रदेशमा अधिवेशन हुने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तर, को’भिड म’हा’मारी पुनः फैलिएसँगै एमालेको प्रदेश अधिवेशन पनि प्रभावित बनेको छ ।
पछिल्लो समय कोरोना सं’क्र’मण तीव्र फैलिरहेको छ । यही बेला एमालेका जिल्ला अधिवेशन चलिरहेको छ । सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ ।
काठमाडौं, ललितपु र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक स्थानमा भेला र समारोहमा रोक लगाउने तयारी गरेसँगै एमालेले प्रदेश अधिवेशनको मिति सारेको हो ।
एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले ८ माघमा तय भएको प्रदेश अधिवेशन सरेको जानकारी दिए । ८ माघका लागि तोकिएका एमालेका प्रदेश अधिवेशनहरू २८ र २९ माघका लागि सारिएको उनले बताए ।
एमाले अधिवेशन : ७० मत खसाल्न तीन घण्टा
नेकपा एमाले अछामको आठौँ अधिवेशनमा मतदान प्रक्रियामा निकै ढिला भएको छ। बिहान ९ बजे सुरू भएको मतदानमा तीन घन्टामा ७० मत मात्रै खसेको मतदान अधिकृत कृष्णप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । बिहान ९ बजेदेखि लाइन लागे पनि मतदान गर्न सकस भएको मतदता सीता कुँवरले बताइन ।
आयोजक कमिटीले मतदान स्थान व्यवस्थित नबनाएका कारण ढिलाइ भएको मतदाताहरूको गुनासो छ । यहि गतिमा मतदान भए सबै मतदाताले मतदान गर्न तीन दिन लाग्नेछ। मतदान प्रक्रियालाई चाडो गर्न भन्दै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य अछाम जिल्ला ईन्चार्ज झपट बोहरा, अध्यक्षका उम्मेदवार प्रकाश शाह, चन्द्र बोहरा मतदान स्थल मै पुगेका छन् ।
Prevएमाले प्रभावशाली नेताबीच यी चार प्रदेशमा कडा टक्कर, ओली समूहकै नेताहरु एक अर्काको खुट्टा तानातानको अवस्था
Nextश्रीमान् कांग्रेसको क्षेत्रीय सभापति, श्रीमती एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य, कार्यकर्ताहरूले खोलेदिए पोल …